Inona no atao hoe ROAS? | Martech Zone fanafohezan-teny
Martech Zone » fanafohezan-teny » Fanafohezana manomboka amin'ny R	» ROAS
ROAS no fanafohezana ny Miverena amin'ny fandaniana amin'ny dokam-barotra.
Tondro fandrefesana lehibe amin'ny varotra izay mandrefy ny vola miditra isaky ny dolara lany amin'ny dokam-barotra. Mitovy amin'ny fiverenan'ny fampiasam-bola (ROI), ny ROAS dia mandrefy ny ROI amin'ny vola apetraka amin'ny dokambarotra nomerika na nentim-paharazana. Ny ROAS dia azo refesina amin'ny tetibola ara-barotra manontolo, tambajotra doka, doka manokana, tanjona, fanentanana, famoronana, sy ny maro hafa.